Akụkọ ifo Pegasus: Nchịkọta dị mkpirikpi - UniProyecta
N'akụkọ ifo ndị Gris, e nwere akụkọ mgbe ochie dị iche iche nke ndị na -akwado ya bụ chi, titans, dike ... mana enwere akụkọ ifo dabere n'ụdị mmadụ ndị ọzọ dịka ọ dị Pegasus. N'atụghị egwu n'ihu, anyị ga -ahapụrụ gị nnukwu ihe a Akụkọ ifo Greek maka ụmụaka (nke ga -atọkwa ndị okenye ụtọ) gbasara ama ama a ịnyịnya nwere nku.
Ọ ga -amasị gị ịmara akụkọ dị egwu banyere ịnyịnya na -efe efe, ndị akụkọ ifo na nnukwu ihe egwuregwu? Achọrọ m igosi gị ihe na -atọ ọchị Akụkọ banyere Pegasus, ịnyịnya na -enweghị atụ. Anụmanụ a nwere ọmiko nọ n'oge Olympus ma kwụsie ike na mbara igwe ruo mgbe ebighị ebi.
Wepụta oge na -atọ ụtọ ịmara Pegasus, ịnyịnya ahụ nwere nku, nke mere ya ọpụrụiche nke ukwuu Akụkọ ifo ndị Greek. N'ebe a, ị ga -ahụ ka e si kee equine a n'ụzọ dị omimi, ọ bịara bụrụ nke otu chi kacha ike nke Ugwu Olympus na ihe kpatara otu kpakpando mara mma ji nwee aha ya. Ị ga -ahụ na ọ ga -amasị gị ịgụ gbasara akụkọ a.
1 Onye bụ Pegasus?
2 Bellerophon na Pegasus
3 Pegasus Adventures n'Ugwu Olympus
4 Kpakpando nke Pegasus
Onye bụ Pegasus?
Kedu ka esi ekepụta ihe okike a dị ebube? Enwere nsụgharị abụọ dị iche iche sitere na mmalite ya. Otu n'ime ha bụ na o sitere n'ọbara Medusa ma kee ya na ala nke oke osimiri, yabụ aha ya pụtara "Mmiri." Ndị ọzọ bụ na Poseidon tụgharịrị n'ịnyịnya ịnọnyere Medusa ma ọ bụ mgbe ọ tụrụ ime.
Mgbe amụrụ ya, ejima ya nwoke bịakwara n'ụwa Chrysaor, nwa nwoke Golden, onye na -adịchaghị ka Pegasus. Ha abụọ bụ akụkụ nke ihe ọchị na -atọ ọchị yana ndị dike ndị ọzọ nke Gris oge ochie.
Ihe e ji mara ịnyịnya a bụ inwe nku abụọ dị ịtụnanya nke nyere ya ohere ifefe n'elu Olympus, ya na Zeus, chi nke ụwa, onye nwere mmasị na ikike ya nke ukwuu nke na o kpebiri iweghara ya mgbe ọ kwaturu Bellerophon, onye nwe ya ochie. .
Bellerophon na Pegasus
A maara onye bụbu onye nwe Pegaso dị ka “Bellerophon”. Na ụkpụrụ a kpọrọ ya "Leophontes"Ma ozugbo o gburu Belero, ha malitere ịkpọ ya. E nwere nsụgharị dị iche iche nke otu o siri nweta ịnyịnya ahụ. Otu n'ime ha natara ya dị ka onyinye Poseidon. Onye ọzọ nọ na -achọta ya na isi iyi Pinero mgbe ọ na -a waterụ mmiri. Nke ikpeazụ bụ onyinye chi nwanyị Athena nyere.
Versiondị ọhụrụ a bụ nke kacha dịrị nchebe nke merela n'ihi na ọ dabara na akụkọ akụkọ Mbibi Chimera, ajọ anụ ọjọọ nwere isi abụọ nke pịara ndị mmadụ na anụmanụ ha niile ihe. Ihe e ji mara ya bụ inwe ozu ewu, ọdụ ya bụ agwọ na isi ya bụ ọdụm na dragọn, ọ na -agbụpụ ọkụ wee gbaa ihe niile nọ n'ụzọ ya.
Dị ka akụkọ mgbe ochie si kwuo, mgbe Belero nwụsịrị, Bellerophon chere na ọ dị mkpa ka ọ sachaa onwe ya ịga Tirinto wee rịọ Eze Preto maka enyemaka. Site na ihe ọjọọ ya, nwunye eze hụrụ n'anya ma na -eme aghụghọ dị iche iche iji nweta ọmịiko nwa okorobịa ọjọọ ahụ. Ebe ọ na-enwetaghị ihe ọ chọrọ, ajọ eze nwanyị ahụ ghagidere ya ụgha, na-amanye di ya ka o wepụ ya na nnukwu ụlọ wee ziga ya na ọgọ ya nwoke.
Nna nna Yóbates chọrọ ịchụpụ ya, gịnị ka ọ na-eme iji nweta ya? Edebere ya ọrụ igbu anụ ọhịa Chimera dị egwu. N'ihi etu ọrụ a ga -esi siere Bellerophon ike, chi nwanyị pụtara Athena na -arụ ọrụ dị oke mkpa: na -enye ya bridle ọla edo ka ọ zụọ Pegasus.
N'ụzọ dị otu a, o mere ya, ha wee hiwe otu zuru oke nke wepụrụ nnukwu anụ mmiri Chimera dị egwu. N'oge na -adịghị anya, ha jisiri ike merie ụmụ nwanyị Are, ndị agha agha, nke a maara nke ọma Ihe amazon, si otú a na -enweta nsọpụrụ na Olympus.
O di nwute na Bellerophon juputara na nganga ma chọọ ịbụ chi ọzọ. Zeus, n'atụghị egwu nke iwe were ya nke ukwuu, zigara otu ahụhụ ka ọ taa Pegasus. Nke a mere ka nwa okorobịa ahụ na -alụ agha daa na ndagwurugwu, si otú a na -enwe nkwarụ maka ndụ yana na -enweghị ịnyịnya ya na -efe efe. Ozugbo enwere onwe ya, ọ na -aga Olympus ebe a na -eji ọ joyụ nabata ya.
Pegasus Adventures n'Ugwu Olympus
Ozugbo a tọhapụrụ Pegasus, Zeus nabatara ya na Olympus wee soro chi ndị a nọrọ ndụ ya niile. N'oge ọnụnọ ya, ọ nọ na asọmpi ịbụ abụ a ma ama ebe ụmụ nwanyị Muses nke Piero rụrụ. Olu ndị a na -atọ ụtọ dị egwu nke ukwuu Ugwu Helicon ọ na -eji anwansi agbago elu wee ruo na mbara igwe. N'ịbụ onye chere ụdị ihe iyi egwu a ihu, Poseidon gwara Pegasus na ọ kụrụ ugwu ahụ wee laa ọzọ. N'akụkụ ahụ bilitere Isi iyi Ihu Igwe.
Nkwenye ọzọ ịkọrọ Pegasus, bụ nhọpụta ya dị ka onye na -eburu àmụ̀mà na égbè eluigwe site na Zeus, otuto a na -achọsi ike nke ukwuu. Tụkwasị na nke ahụ, ọ nwere ọ joyụ nke idu ụgbọ ịnyịnya nke chi nwanyị Aurora ka chi bọrọ.
Kpakpando nke Pegasus
Onyinye kacha mma Zeus nwere ike inye Pegasus bụ ka ọ gbanwee ya ka ọ bụrụ ọmarịcha ìgwè kpakpando. N'ụzọ dị otu a, ọ ghọrọ onye na -adịghị anwụ anwụ n'ụyọkọ kpakpando ebe isi anọ dị: Markab, Scheat, Pegasi na Alpheratz; nke na -etolite akụkụ anọ. Na nke mere na ọ bụghị naanị ya, ọ hapụrụ ya na nnukwu ụyọkọ kpakpando ndị ọzọ, nke kacha nso: Andromeda na Lacerta.
Akụkọ a mara mma na -egosi gị uru anụ ụlọ na ihe egwuregwu niile ị nwere ike inwe na ndụ. Pegasus nwere ike ịbụ anụmanụ ọ bụla, na gị na gị nwere ike nwee njikọ na -enweghị ike ekewa wee mee otu ndị otu kacha mma n'ọtụtụ oge agaghị echefu echefu.
Inicio » omenala » Akụkọ ifo ndị Gris » Akụkọ ifo Pegasus